Waa maxay Maalgelinta Aaminaada? Dulmar, Iyo Sida Ay U Shaqeyso - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Waa maxay Maalgelinta Aaminaada? Dulmar, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
Bulshada maanta, waxa ka dhashay buuq ku saabsan baahida loo qabo in la maalgashado oo la qorsheeyo mustaqbalka. Maalgelin badan ayaa la macno ah inay kor u kacday laakiin safka hore ee tan, dhammaan waa cryptocurrency. Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waxa ay jirtay sanado laakiin waxa ay soo shaacbaxday oo kaliya inta lagu guda jiro cudurka faafa ee covid-ka hadana taasi waa wax qof walba uu ka hadli karo.
Marka laga reebo shakhsiyaadka, shirkadaha iyo ururada ayaa sidoo kale galay bandwagon loo yaqaan cryptocurrency. Habkan cusub ee maalgashiga ayaa sidoo kale keenay habab cusub oo dadka lagu khiyaaneeyo lacagtooda adag.
Ururo badan ayaa bilaabay goobo si ay uga caawiyaan maal-gashadayaasha aqoonta leh in aanay samayn wax lacag ah. Inkasta oo qaar ka mid ah ururadan ay halkan u joogaan inay dilaan kuwa cusub, qaar run ahaantii waa sharci waxayna kaa caawin karaan inaad lacag sameyso.
Maqaalkan, waxaan u doortay mid ka mid ah shirkadaha noocaas ah si aan dib ugu eego oo aan ku siiyo faahfaahin yar oo ku saabsan sida saxda ah ee goobtani u shaqeyso. Ururku waa maalgashi kalsooni.
Waxaan rajeyneynaa, maqaalkani wuxuu kuu dejin doonaa xoogaa aragti ah si aad u ogaato haddii kalsoonida la aamini karo ay u qalanto ama haddii ay tahay hab kale oo degdeg ah oo ganacsadaha shirkadu uu lacag uga sameeyo tirada badan.
Haddaba, aan isla markiiba galno.
Akhri: Waa maxay Lacagaha Index? Tilmaamaha Buuxa ee Maalgelinta.
Waa maxay maalgashiga kalsoonida?
Maalgelinta kalsoonida waa shirkad MLM ah oo ka shaqeysa niche MLM. Waxaa lagu aasaasay Panama bishii Maajo 2019 waxaana la og yahay inay xafiis ku leedahay Estonia, Tallinn.
Shirkaddu waxay ku bilawday suuq-geynta hantida cryptocurrency iyo maamulka laakiin hadda waxay ku kortay meel ka baxsan xuduudahan iyadoo suuqa cryptocurrency uu ka dhigan yahay qayb yar oo ka mid ah dakhliga ay soo saarto shirkaddan.
Laga soo bilaabo 2019, kobaca shirkaddu waxay ahayd mid la taaban karo iyadoo dhowr hawlood oo cusub ay ka soo baxayaan halkan iyo halkaas ururka dhexdiisa taas oo aan ugu horreyn ku lug lahayn maareynta hantida cryptocurrency.
Laakin waxa kale oo ay ku sii fidaysaa hawlo kala duwan oo ay ka mid yihiin; helitaanka shirkad khamri ah oo siisa macaamiisha kalsooni meel maalgashi oo leh adeegyo halkaas oo aad ka iibsan karto khamri oo laguu soo dejiyo, inkasta oo adeeggan uu khuseeyo dadka deggan Spain oo keliya.
Muuqaal kale oo cusub oo maalgashi aamin ah oo lagu daray waa naadiga socdaalka ee Trust kaas oo kuu oggolaanaya inaad abaabulo safarro adoo ku bixinaya bitcoin ama cryptocurrency kasta oo la taageerayo ee doorashadaada.
Ururka ayaa ka baxay dariiqa uu ku abuurayo cryptocurrency u gaar ah oo loo yaqaan 'Truster coin' kaas oo si rasmi ah loo soo bandhigay 2021 oo ah lacagta rasmiga ah ee gudaha madal.
Ururkan ayaa sidoo kale si guul leh u helay macdanta dheemanka waxayna macaamiisheeda u soo bandhigaan iibsashada xirmooyinka dheemanka kalsoonida iyadoo mid walba uu ku kacayo ilaa $1000 oo soconaysa muddo hal sano ah.
Maalgelinta kalsoonida waxay leedahay sifooyin kale sidoo kale taas oo ka dhigaysa iskaashiga iyaga oo aad u faa'iido badan oo soo jiidasho leh iyo ballanqaadkooda ah samaynta maalgelinta crypto si ay u helaan dadweynaha, la yaab ma leh waxaa jira macaamiil badan iyo maalgashadayaasha u heellan inay qayb ka noqdaan ururka.
Aan sii socono oo aan aragno sida aan lacag uga samayn lahayn ururkan
Waa kuma aasaasaha Maalgelinta Trust?
Aasaasaha dhabta ah ee maalgashiga Trust lama yaqaan. Si kastaba ha ahaatee, raadinta la sameeyay dhowr magac ayaa soo baxay kuwaas oo ah madaxda maalgelinta Trust.
Mid ka mid ah magacyadaas, ninka ugu sarreeya waa Diego Chaves, oo ah maamulaha maalgashiga ee Trust. Taariikh nololeedkiisa shirkadeed, waxa uu ku andacoonayaa in uu tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah u leeyahay suuq-geynta shabakada inkasta oo aan la garanayn in uu qayb ka ahaa MLM-yada ama ganacsiyada kale ee caanka ah.
Sidoo kale, magac kale oo soo bandhigay wax badan ayaa ah Agaasimaha Suuqgeynta ee magaca Fabiano Lima.
Isaga iyo Diego Chaves waa Brazilian u soo guuray Spain horraantii 200aadkii oo si qoto dheer uga qayb qaatay suuqgeynta shabakadaha.
Maxay ku kacaysaa inaad ku biirto maalgashiga kalsoonida?
Hadda, hadal ku filan oo ku saabsan shirkadda iyo aasaasaheeda. Waa markii aan hoos ugu dhaadhacno nuxurka dhabta ah ee sida lacag loo sameeyo iyadoo la kaashanayo maalgelinta Trust.
Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad xubin noqoto. Si aad xubin uga noqoto Maalgelinta Trust, waxaad u baahan doontaa inaad ka doorato liiska 14 xidhmo oo kala duwan oo aad ku iibsan lahayd mid si aad u bilowdo.
Kala duwanaanshaha qiimaha xirmooyinkan ayaa u dhexeeya wax yar ilaa $15 ilaa inta ugu badan $100,000.
Waxa kuu soo haray waa in aad jaakadaada u jarto sida maradaadu tahay oo aad doorato baakadda kuugu habboon.
Sideed lacag ugu samaysaa maalgelinta kalsoonida?
Haa, hadda tani waa su'aasha ugu weyn ee qof kastaa rabo in laga jawaabo. Sideed lacagta u samaysaa? Sideed u heli kartaa faa'iido badan inta aad awooddo?
Hadda, maalgelinta kalsoonida waxay siisaa xubnaheeda tiro qorshayaal magdhow ah oo ay saddexda ugu caansan yihiin: soo celinta maalgashiga, gunnada komishanka, iyo gunnada guusha darajada.
Hadda si aad tan u sii fahamto, hoos waxa ku qoran nuxur kooban oo ku saabsan waxa qorshe kasta oo magdhow ahi ka kooban yahay:
Soo celinta maalgashiga: Hadda, aaminaadda maalgashiga waxay ballan qaadaysaa 200% soo celinta maalgashiga (ROI) maalgashigaaga ugu horreeya. Waxa kale oo ay xayaysiiyaan soo celinta maalinlaha ah ee maalgashigaaga oo gaadhaya 5% taas oo asal ahaan ku siinaysa raasumaalkaaga maalgashiga gudaha 20 maalmood. Haa, waxay u muuqataa wax aan la rumaysan karin laakiin taasi waa waxa ay bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, markaad rabto inaad ka baxdo waa inaad bixisaa 5% kharashka ka noqoshada soo celintaada iyo guddiyadaada
Gunnooyinka Komishanku: Hadda marka laga reebo soo-noqoshada maal-gashiga faa'iidada iyo afka-ka-soo-baxa, Maalgelinta Trust waxay sidoo kale bixisaa gunno komishanka oo ku salaysan cinwaankaaga iyo inta qof ee aad u qortay sababta. Haddii aad waligaa u dhex gashay MLM ka hor waa in aad taqaanaa habka gudbinta iyo sida nidaamka binary system u shaqeeyo. In Trust Investment, lacagta lagu helo komishanka waxay ku salaysan tahay inta qof ee aad qoratay iyo waliba inta qof kasta oo aad shaqaalaysiisay uu ku maalgashaday shirkadda. Gunnada ugu badan ee komishanka maalintii waxay jiiftaa 5% taas oo la mid ah maalgashigaaga bilowga ah ee maalgashiga Aaminaada.
Gunnada Kasbashada Darajada: si aad sare ugu qaaddo kanaalada lacagta caddaanka ah ee qulqulka maalgashiga aaminaadda, waxaad ku kasbataa iyada oo ku saleysan guushaada darajada sidoo kale. Wadar ahaan waxa jira ilaa lix darajo, laga bilaabo ka ugu yar in uu yahay Hogaamiye kooxeed iyo darajada ugu saraysa oo ah agaasimaha Global. Gunnooyinka guusha derajooyinka sidoo kale waxay darajooyinkoodu u sarreeyaan $100 illaa $150,000 bishii.
Kuwaas, kasbashada qorshayaasha waxaad ka arki kartaa in ku dhex milmay maalgashiga kalsoonida aysan ahayn wax kaftan ah sidoo kale waxaa jira faa'iido badan oo la sameeyo hal mar meel bannaan.
Sidee u shaqeysaa kalsoonida maalgashiga?
Hadda asal ahaan, Maalgelinta Trust ayaa ka shaqaynaysay suuqa cryptocurrency muddo sannado ah hadda, oo haddii aad wax ka ogaato cryptocurrency waxaad ogaan lahayd in suuqa uu kor u kacay oo wuxuu kaa qaadi karaa eber ilaa boqol arrin daqiiqado ama saacado ah haddii waxaad haysataa macluumaadka saxda ah iyo xeeladda.
Hadda, Maalgelinta Aaminaada waxaa taageera koox 7-nin ah oo ganacsato xirfadlayaal ah oo si hufan u xirfadaysan xeeladahooda ama xeeladahooda sida loo tarjumo suuqa.
Dhammaantood waxay wax ka qabtaan suuqa iyaga oo ka eegaya aragti ka duwan iyaga oo hubinaya in xitaa haddii mid ka mid ah uu khasaaro kuwa kale ay heli doonaan isla xididka sidaas darteed dhamaadka dhammaan faa'iidooyinka ayaa la soo saarayaa.
Dhammaadka mid kasta, boqolkiiba dakhliga waxa loo qaybiyaa xubnaha iyadoo lagu saleynayo heerka maalgashiga. Tusaale ahaan, haddii waxsoosaarka maalintaas uu ahaa 1% markaas isticmaale haysta maalgashiga $100 wuxuu helayaa dollarka halka midka haysta qorshaha maalgashiga ee $10,000 uu helayo $100.
Tani waa run-hoosaadka aasaasiga ah ee sida lacagaha loo sameeyo oo loo qaybiyo maalgelinta kalsoonida maalin kasta.
Soo celinta maalgashiga kalsoonida
Sida ay khusayso soo celinta, sidaan hore u soo sheegnay, soo celinta maalgashiga waxa laga yaabaa inay kor u kacdo ilaa 200% sannadkii iyo ilaa 5% maalintii oo leh celceliska dakhliga bishiiba 20%.
Ku dhawaad ​​shan bilood gudahood, waxaa laguu xaqiijinayaa inaad dabooshay kharashkii maalgalinta bilowga ah oo aad qaadatay faa'iido wanaagsan oo ku dhawaad ​​laba jibaartay ama saddex jibaartay maalgashigaaga.
Goorma iyo intee ayaad kala bixi kartaa
Hadda, si aad faa'iidadaada u hesho oo aad uga soo noqoto maalgashiga kalsoonida waa sida ugu fudud ee aad u garaacdo badhanka ka noqoshada. Waxaad la bixi kartaa ugu hooseeya ilaa $1 iyada oo aan walwal lahayn. Sidoo kale, waa inaad maskaxda ku haysaa in bixitaan kastaa uu soo jiidanayo komishan dhan 5% si kastaba ha ahaatee inta aad rabto inaad kala baxdo.
Lacagta lagala baxo waxa lagu sii dayn doonaa jeebkaada 48 saacadood gudahood markaad gudbiso codsiga ka noqoshada. Dhammaan dukumeentiyada loo baahan yahay waa in sidoo kale la xaqiijiyaa ka hor inta aan la ansixin. Xaqiijintan si kastaba ha ahaatee waxa loo baahan yahay hal mar oo kaliya inta lagu jiro ka bixida koowaad.
Waa maxay website-ka maalgashiga kalsoonida?
Si aad isu diiwaan geliso oo aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan maalgashiga kalsoonida booqo trustinvesting.com
Waa maxay maalgashiga ugu yar ee maalgashiga Trust?
Waxaad ku maalgelin kartaa ilaa $15 ugu hooseeya maalgashiga kalsoonida iyo ilaa $100,000 oo ku xidhan xidhmada maalgashiga ee aad doorato.
Waa maxay ka noqoshada ugu yar ee maalgashiga kalsoonida?
Waxaad kala bixi kartaa inta ugu yar sida $1 boorsadaada aaminaadda maalgashiga adoo maskaxda ku haya in komishanka ka bixida ee 5% ay ku lifaaqan yihiin bixitaan kasta
Intee in le'eg ayaan ka heli karaa maalgashiga aaminaadda?
Maalgelinta kalsoonida waxay bixisaa ilaa 200% sanadkiiba waxay ku soo noqotaa maalgashigaaga iyo in ka badan 5% waxay ku soo noqotaa maalin kasta maalgashigaaga iyadoo 20% bishii la hubo maalgashiga bilowga ah.
Sideen lacag uga samayn karaa maalgelinta kalsoonida?
Waxaa jira 3 dariiqo oo waaweyn oo lagu ururiyo dulsaarka iyo faa'iidada maalgashiga kalsoonida kuwaas oo ah soo celinta maalgashiga, gunnada komishanka, iyo gunnooyinka maalgashiga.
Guud ahaan, aaminaadda maalgashiga waxay u dhawdahay run in ay run tahay. Waxa kale oo jirta caddayn lacag-bixineed oo laga helay macaamiisha la rumaysan yahay si ay ugu caddeeyaan sharcinimadooda.
Dhammaan faahfaahinta kor ku xusan, sawir cad ayaa laga arki karaa sida ay u shaqeyso iyo sida loo tago maalgashiga laakiin mar walba maskaxda ku hay inaad maalgeliso waxa aad awoodid inaad lumiso sababta suuqa cryptocurrency dhab ahaantii waa mid kacsan oo aan la saadaalin karin mararka qaarkood.
Ma rajaynaysaa inaad ka heshay akhriska?
Fidelity Vs Vanguard Investment 2022: Waa maxay sababta ay tahay inaad u doorato mid kasta oo ka mid ah dallaaliyeyaashaas
Fidelity Vs Vanguard, dillaalkee ayaa adiga kuugu fiican? Talaabada koowaad ee maalgashiga faa'iidada leh waa doorashada…
Go'aaminta sanduuqa anshaxa ugu wanaagsan ee aad u adeegsan karto maalgashiga ma ahan mid fudud sida markii aad…
Sidee Loo Maal Galiyaa Xisaabinta Quantum 2022 | Waxyaabaha Hubaal ah ee ay tahay inaad ogaato
Kombuyuutarrada Quantum waxay noqon karaan waxa ugu weyn ee xiga sannadaha soo socda marka ay timaaddo maalgelinta.…
Raadinta waxa $100 ay kuu qaban karto? Aad bay u badan yihiin. $100 waxay noqon kartaa wax yar laakiin…
Roth IRA (Habaynta Hawlgabka Shakhsi ahaaneed) waa akoon kayd oo hawlgab ah oo kuu ogolaanaya inaad ku bixiso cashuuraha…